Labo DUMAR oo Nin isku Qabsaday oo sababay FADEEXADII ugu weyneed C.I.A . | Wargeyska Faafiye.	Sunday, July 24th, 2016	ARE YOU A WRITER?
Labo DUMAR oo Nin isku Qabsaday oo sababay FADEEXADII ugu weyneed C.I.A .
Published on November 12, 2012 by editor · No Comments
Hogaamiyihii Waaxda sirdoonka Dalka Mareekanka ee C.I.A ayaa waxaa ku dhacday Fadeexadii ugu weeyneed ee ku dhacda qof ka tirsan Waaxdaas Tan iyo markii la aasaasay Sanadlii 1947.
David Petraeus ayaa waxaa ku dhacday fadeexad aad u weeyn kadib markii la ogaaday in uu sameeyay fal gogol dhaaf ah , Falkaas ayaa waxaa uu la sameeyay qof dumar ah oo ka qoreeysay Buug Taariikh Nololeedkiisa ku saabsan .
Paula Broadwell oo da’ deedu tahay 40 Jir ayaa waxay la shaqeeyneeysay Ninkan mudo dheer , Shaqada caadiga ah oo lagu ogaa ayaa waxeey eheed in ay wax ka ogaato Nolasha David Petraeus si ay Buug ku saabsan Nolashiiisa u qorto laakin waxaa soo baxday in shaqadaas ay u dheereed xiriir hoose ay la sameeysan Hogaamiyahan .
Wuxuu Xiriirkan socday mudo dheer, laakin cabaar ka dib ayaa waxaa soo kala dhex gashay labadan Qof kaloo dumar ah , oo iyadana la sheegay in ay xiriir la leheed David Petraeus .
Qoftii Paula Broadwell ayaa kadib markeey ogaatay xiriirkan uu la leeyhay gabadhan kale David Petraeus aad u maseertay , waxeey biloowday in ay dagaal iyo hanjabaad ku qaado qoftii kale .
Waxeey u qortay E-MAIL Badan oo hanjabaad ah , iyadoo qarineeysa Magaceeda oo iska dhigeeysa qof kale .
Gabadhii labaad oo uu xiriirka la lahaa David Petraeus ayaa inteey aad u cabsatay oo nafteeda u baqday ayeey E-mail’s Kii loo soo qoray waxeey u gudbisay qof ay saaxiibo ahaayeen oo u shaqeeya waaxda baaritaanka ee FBI .
Qofkii FBI da ka tirsanaa ayaa bilaabay baaritaan , wuxuu dib u raacay meeshi laga soo diray E-mails ka, ilaa Computer kii laga soo diray ayuu soo ogaaday kadibna sidaas ku soo helay Magaca Paula Broadwell.
Waxeey F.B.I du u dhacday Computer ka Paula Broadwell kadibna ay bilaabeen in ay akhriyaan E-mails iyo qoraalo badan ay qortay qoftan.
Baaritaankii wuxuu socdo ayeey F.B.I du BiIaabeen in ay akhriyaan E-mails ay is dhaafsanayeen David Petraeus oo ah Hogaamiyaha C.I.A da iyo Paula Broadwell , waxeey arkeen qoraalo badan ay labadan ka hadlayeen wax yaabo badan oo aad u fool xun.
waxeey ogaadeen in Paula Broadwell iyo David Petraeus in uu ka dhexeeyo xirii gogol dhaaf ah .
Dhacdadan ayaa waxeey ka yaabisay shacabka Mareekanka iyagoo la yaabay sida lagu soo ogaan karo wax yaabaha uu sida sirta ah u sameeyay Ninkan ka tirsan ama ah Hogaamiyaha C.I.A da.
Waxaa C.I.A da lagu yaqaana in aan si dhib yar lagu ogaan sirta waaxdaas ama qof ka tirsan.
David Petraeus ayaa iska casilay shaqadiisii kadib markii ay dhacdadan soo shaac baxday.